Contact Us | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
The page you have attempted to access is restricted to our members and subscribers.
If you are an existing Mandalay Gazette member or subscriber, you need to login to access the protected areas of our site. Please note that access to certain secured pages may be limited to specific member types.
If you have forgotten your password, enter your work email address here and your password will be emailed to you.
For questions or problems with the website, contact Administrator
မန်းဂဇက် (Thakhin C.J) များသာ ဖတ်နိုင်သော စာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်။
မန်ဘာ(ရွာသူား)အဖြစ် အရင်မှတ်ပုံတင်ပါ။ မှတ်ပုံတင်သူသည် မန်းဂဇက်၏စည်းကမ်းအားလုံးကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
// Comment for page Kai 121212
chit530621 says: Hi
I can’t read because there all blank square spot. Is it need to download Burmese version?
Was this answer helpful?LikeDislike 8415
kai says: If you are not able to see Myanmar characters on this website
1. We used embedded dynamic font file (.eot) with Zawgyi font on our sites.
If your browser IE (Internet Explorer), then no problem, you should see Burmese Language without doing anything.( http://www.microsoft.com/Windows/internet-explorer/)
2. If your browser Mozilla Firefox, you will need to install Zawgyi-One font in your computer.Please download Zawgyi-One font and install it on your computer.Here is the download link for the font and keyboard layouts.
Comments By PostPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - padonmar - kyaw hteikအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - padonmar - garudaတွံတေးအလှူ.... - kyaw hteik - kaung kin pyarမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - Mလုလင် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - Ma Ma - uncle gyiဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - phoe cho - phoe choကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - uncle gyi - KZအတ္တဆန် - uncle gyi - Ma Maရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - uncle gyi - KZမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - uncle gyi - KZယုံလား? - uncle gyi - KZပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - TNA - မောင် ပေ``ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´ - KZ - TNAကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - TNA - မောင် ပေကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAသူ - ရွှေ ကြည် - KZနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Shwe Ei - Shwe Eiမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - အရီးခင်လတ် - KZဖိုင်နယ်ပွဲ မှာ ပိုင်ရှယ်ဆွဲ (၂၅၇၄) - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - Foreign Resident - parlayar 46မင်္ဂလာပါ - ဘဲဥ - jujumaEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77775 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67212 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66703 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58176 Kyats )MaMa (57665 Kyats )Top Posts & Pagesမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။